Igumbi eliluhlaza kwindlu enendawo yokuphola ekuthiwa yi-Art Nouveau - I-Airbnb
Igumbi eliluhlaza kwindlu enendawo yokuphola ekuthiwa yi-Art Nouveau
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguChristiane
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-26 Okt.
Indlu enegadi enkulu iseRahlstedt, ngaphandle kweHamburg, kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka kwiYuro-FH, kwiYunivesithi yaseLos Angeles, nakwiStudio Hamburg. Kumbindi wesixeko kuthatha malunga nemizuzu eyi-15 ngetreyini yengingqi. Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ikwayindawo yokugcina indalo iHöltigbaum. Nathi uza kudibana nendalo uze kwangaxeshanye ube kufutshane nesixeko esikhuthazayo.
Ngokuqinisekileyo ikhona indlela yokungena kwi-wifi. Akukho-TV kumagumbi.
Kwindlu yethu enendawo yokuphola ekuthiwa yi-Art Nouveau, siyazamkela iindwendwe eziyithanda kakhulu imigangatho yethu yokudlala i-parquet kunye ne-1912. Igadi enamagumbi aliqela nayo ingasetyenziswa.
Amagumbi abomvu neluhlaza ayafumaneka kuwe, kunye noluhlaza nenani labantu elihambelanayo.
Ikhitshi negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala unalo ixesha elininzi lokuzenzela ngokwakho. UChristiane uhamba kakhulu ngobuchule, xa esekhaya, ubonisa ikhitshi lakhe negumbi lokuhlambela.
Ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela kumgangatho osezantsi kudityaniswe neGumbi Eliluhlaza.
Sifuna ukunika iindwendwe zethu inkululeko nokukhululeka, kwaye sicinga ukuba uza kuziphatha kakuhle izinto zethu.
Abantwana bamkelekile apha, bangadlala kwigadi enkulu.
Iintsuku eziyi-7 e EHamburg
Iindawo ezikufutshane zithi cwaka. Ngokuqhelekileyo yindawo yokujima. Kukho indawo eyaneleyo yokupaka, isitalato sokuthenga sikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (malunga nemizuzu eyi-15), unokufikelela kwivenkile yezinto ezibhakiweyo kwimizuzu eyi-5. Isikolo Sokufunda Umgama WaseYurophu (ILS EURO-FH) sinokufikelelwa kwimizuzu eyi-10 uhamba ngeenyawo. Kwindawo ekufutshane yokugcina indalo iHöltigbaum kukho iindlela ezininzi zokuhamba ngebhayisekile kunye nokunyuka intaba.
We love travelling and exploring new and exiting places.
On our journeys we like to get to know the people, the culture, the art and the nature of the places we go to. Also we mostly have a lot of reading and studying to do.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izicelo, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi. I-oneof nathi idla ngokuba kwisayithi.
Inombolo yomthetho: 52-0027285-20